Aleo tsy miverin-dalana… | NewsMada
Par Taratra sur 15/06/2021
Vita ve ny ady amin’ny fihanaky ny valanaretina Covid-19? Tsy lavina, efa mihamiverina tanteraka amin’ny fiainana andavanandro ny mponina amin’ny ankapobeny. Arahaba soa, arahaba tsara… Ho lasa amin’izay ratsy rehetra? Mba tsy hisy ny hoe andiany fahatelo, fahefatra… Sanatria. Na izany aza, mbola mitohy ary tsy maintsy atao hatrany ny fitandremam-pahasalamana izay efa fanao amin’ny are-mifindra rehetra: manana ny fotoany, manana izay mampiavaka azy…
Tsy hita maso na hita hofaritana mialoha rahateo ny tsimokaretina coronavirus, ka mila fahamailoana mandrakariva. Toy tsy nanampoizina ny fiverenana amin’ny fihibohana noho ny fidiran’ny andiany faharoa avy any Inda atao hoe Delta amin’izao. Miverimberina hatrany koa ny fampahatsiahivana hoe tsy mifidy olona, haingam-pifindra… Tsy vitan’izany, ao anatin’ny vanim-potoana ririnina i Madagasikara amin’izao fotoana izao: tsy fantatra be ihany izay mety ho fiovan’ny valanaretina.
Noho izany, tsy misy toy ny fitandremana ihany: ho an’ny rehetra fa tsy anavahana ary hatramin’ny farany… Efa nasian-teny matetika koa ny amin’ny fahaizana miara-miaina amin’ny aretina amin’ny fanajana ny fepetra sakana rehetra amin’ny antsipiriany tsy manontolo. Mba tsy hisy intsony ny fiverenana amin’ny firongatry ny aretina, raha mba efa miverina amin’ny fiainana andavanandro ny rehetra. Eny, na eo aza ny fahombiazan’ny ady, ny fisian’ny fanafody sy ny fanefitra na ny vaksiny…
Na ahoana na ahoana, ela sy mafy ny fanarenana sy fanonerana ary fanorenana ny rava navelan’ny valanaretina. Izay no efa ifantohana amin’izao? Zava-dehibe maika, lehibe… Ny fananana fahasalamana feno sy tanteraka ho an’ny rehetra no ahazoana manatontosa sy manatratra izany. Eo koa ny fahafahana sy fahalalahana: tsy misy intsony ny fihibohana, ohatra, na ny fanakatonana lalana… Mety hiverina izany rehetra izany, raha sanatria miverina ny aretina noho ny tsy fitandremana. Aleo tsy miverin-dalana…